ဆီဆိုင်တွင် မြေယာသိမ်းဆည်းခံရသော တောင်သူများမှ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် – Pa-O Youth Organization (PYO)
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ (၂၀) ရက်နေ့တွင် စစ်တပ်မှ မြေသိမ်းဆည်းခြင်းခံရသော ‌တောင်သူများ၏ ခံစားချက်ကို အများသိရှိရန်နှင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများ၊ တောင်းဆိုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်‌ တောင်ကြီးမြို့ ဟိုတယ်ထိန်သာတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
“တိုင်းမှုးကပြောတယ် တပ်မြေသိမ်းတော့ တောင်သူတွေ ဆန်အဆင်ပြေဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဆန်ထောက်ပံ့ပေးမယ် တစ်ယောက်ဘယ်နှပြည်လဲ ကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ ဆန်၊ ဆီ ၊ ဆား နည်းနည်းပါးပါးပေါ့။ အာ့ဆို ကျွန်တော်တို့ကို တောင်သူအဆင့်လို့ သတ်မှတ်ပြီးတော့ ထမင်းစားရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ပြောသွားတာလား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ် ၊ သားသမီး၊ မျိုးဆက်တွေ ထည့်မစဉ်းစားတော့ဘူးလား။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ နောင်လာမဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖဒရယ် ထည့်မစဉ်းစားတော့ဘူးလား။” ဟု မြေသိမ်းခံရသည့် တောင်သူ ခွန်ချစ်ထွေးမှ ပြောသွားခဲ့ပါသည်။
“ ပအိုဝ်းတွေ ရှမ်းတွေက ပုံစံ ၇ ၊ ပုံစံ ၁၀၅ တေွ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိဘူး။ ဘာလို့လဲဆို မလုပ်လဲရနေတယ် ဆိုတဲ့အတွက်မို့ အရင်က မိရိုးဖလာအတိုင်းလုပ်လာနေတဲ့ လယ်ယာမြေဟာ ခုချိန်ထိပြဿနာဖြစ်တာမရှိဘူး။” ဟု မြေသိမ်းခံတောင်သူ ဒေါ်ချိုချိုဝင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တပ်သိမ်းမြေကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်သူများမှ အချက် (၃) ချက်ကို တောင်း ဆိုခဲ့သည်။
၁. တရားမဝင်သိမ်းဆည်းမြေများကို ခြွင်းချက်မရှိပြန်လည် စွန့်လွတ်ပေးရန်။
၂. တောင်သူလယ်သမား တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုများ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေသော ဓလေ့ထုံးတမ်းမြေယာစနစ် ကို အသိမှတ်ပြုရန်နှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ စီမံခွင့်အား လေးစားလိုက်နာရန်။
၃. အစိုးရမှ လက်ရှိမြေယာပြဿနာအပေါ် လယ်သမားအကျိုးစီးပွား ဦးတည်၍ တောင်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းအခြေခံကာ ကူညီဖြေရှင်းပေးရန်။
ခမရ ၄၂၃၊ ၄၂၄ မရောက်လာခင်ကာလတွင် ဒေသခံတောင်သူများသည် ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်သည် လွိုင်ကော် တောင်ကြီး ကားလမ်းအရှေ့ဘက်တွင် မြေဧက ၅၀၀ ယာယီသိမ်းခဲ့သည်။ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာန ချုပ်မှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် လမ်းနောက်ဘက်ရှိ မြေဧက ၁၉၀၀ သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။
#HOTEL HTEIN THAR
Tags: Hsi Hseng Land Case Hsi Hseng Land Press Conference ဆီဆိုင် တပ်သိမ်းမြေ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တပ်သိမ်းမြေ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
Previous Statement on Land Confiscation and Human Rights Violation by Military (Tatmadaw) in HsiHseng, Shan State.
Next လူငယ် နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တာရာယ်လျော့ချရေးနှင့် ကုသရေး ဖိုရမ်ပြုလုပ်